9 Zvikanganiso Zvinouraya Zvinoita Kuti Nzvimbo Dzinonoke | Martech Zone
Anononoka mawebhusaiti kukanganisa bounce rates, kutendeuka kwemitengo, uye kunyangwe yako search engine rankings. Izvo zvakati, ndinoshamiswa nenhamba yemasaiti ayo achiri kunetseka zvinotyisa. Adam akandiratidza saiti nhasi yakaitirwa paGoDaddy iyo yaitora inopfuura gumi nemasekondi kurodha. Iye murombo uyo anofunga kuti vari kuchengetedza maviri emari pakubata ... pachinzvimbo ivo vari kurasikirwa matani emari nekuti vangangove vatengi vari kubhadhara kwavari.
Isu takura kuverenga kwedu zvishoma pano, uye handina mubvunzo kuti kumwe kubudirira kwave nekuti takatamira ku Flywheel, yakagadzirirwa WordPress inomiririra ine caching yakakura uye a Zvekutanga Dhirivhari Network dzinofambiswa ne StackPath CDN.
Heano 9 Akafa Zvikanganiso izvo zvinowedzera Yako Peji Yekutakura Nguva:
Kwete Caching - ita shuwa kuti webhusaiti yako inoshandisa Caching kuwedzera kukurumidza. Yemazuva ano zvemukati manejimendi manejimendi masisitimu anochengetedza zvemukati mukati me database uye zvibatanidze nemadhizaini matemplate kuburitsa iro rakaburitswa peji. Iyo dhatabhesi yekukumbira uye kutsikisa zvinodhura, saka caching injini chengetedza iyo kuburitsa kune yakajairwa nguva yenguva saka hapana mibvunzo inodiwa.
Yakawandisa Kudzoreredzwa - dzivisa kushandisa zvakapetwa zviwanikwa zvinonongedza kune mamwe mapeji. Uye shandisa zvakananga zvinongedzo mukati meako wega kufamba. Mumwe muenzaniso ndewekuti yako saiti yakachengeteka, iwe unoda kuona zvese zvinhu zviri saiti, semifananidzo, haina kutaurwa kune yavo isina-kuchengeteka URL. Izvo zvaizoda kuti mifananidzo yese iri papeji iendeswe zvakafanira kune yakachengeteka link.
Kwete Minification - Chinyorwa faira uye CSS saizi faira inogona kumanikidzwa kuburikidza nekudzikisa zvisina basa zvinhu (senge mitsara feeds, kupomhodza, tabo, nenzvimbo.Kubvisa zvinhu izvi kunodaidzwa kugadzira. Mamwe maCMS masystem anogona zvakare kuita izvi otomatiki seyo saiti inotakura uye mapakeji.
Mifananidzo Huru - Vashandisi vekupedzisira vanowanzo isa mifananidzo yakananga kubva kukamera yavo kana foni kuenda pawebhu… dambudziko nderekuti matambudziko aya anowanzo kuve akawanda megabytes. Wedzera boka kune saiti uye yako saiti inodzora zvakanyanya. Zvishandiso senge Kraken inogona kushandiswa usati waisa iyo mifananidzo - kana kubatanidzwa kune saiti yekumhanyisa mifananidzo kuti itaridzike asi iine diki saizi faira.
MaNative Social Mabhatani - mabhatani emuno enharaunda anotyisa. Imwe yeayo akatakurwa akazvimiririra kubva pasocial media saiti uye zvishoma kutariswa kunopihwa kukurumidza kwavanotakura. Edza kushandisa yechitatu-bato masevhisi ayo anozovandudza zvakanyanya yavo yekuremerwa nguva - kana post-kurodha mabhatani kuti asakanganisa yako saiti kumhanyisa zvachose.
Kwete CDN - zvemukati zvekuburitsa netiweki zvine maseva pasi rese ayo anochengeta uye anounza akadzika mafaira padyo padyo nenzvimbo. Uchishandisa CDN inzira inonakidza yekuwedzera peji rako kumhanya, kunyanya kana paine mifananidzo yakawanda.
Heano infographic, 9 Matipi Ekudzora Peji Yekutakura Nguva, Kubva TruConversion.
Kuzivisa: Ini ndakashandisa zvikwata zvedu zvakabatana pane ino positi.